Kwesokunxele uMnuz Sfiso Mngadi ongumphathi wabantu abasha kuleli bandla noDkt Phinius Myeza osanda kwethweswa iziqu.ISITHOMBE : sithunyelwe
UMFUNDISI webandla i-Holy Messenger endaweni yaseMpophomeni, uDkt Phinius Myeza, uthi namanje akakholwa ukuthi useneziqu zobudokotela.
Lokhu kuza ngemuva kokuba i-Church of Council eThekwini ihloniphe lo mfundisi ngeziqu zobudokotela ngoba bebona imisebenzi emihle ayenzela ibandla nemiphakathi eyahlukene muva nje.
Exoxa ne-Echo uDkt Myeza uthe akakholwanga ngesikhathi etshelwa ukuthi uzohlonishwa ngeziqu zobudokotela.
Uthe ngisho nangesikhathi eseyo thweswa iziqu esiteji amadolo ayevevezela kwaze kwaba uyaphuma.
“Kuze kube yimanje angikakakholwa ukuthi ngempela sengiwudokotela. Lena yinto engangihleli ngiyibukela kude angikaze ngizitshele ukuthi umuntu ofana nami ongafundile angagcine esenalezi ziqu. Mina bengizenzela umsebenzi wami ngingazi ukuthi kukhona abantu abawubonayio nabawujabulelayo.
“Ngangihleli ngizitshela ukuthi lena yinto yabantu abafundile. Ngiyathemba ukuthi kuzohamba isikhathi ngigcine sengijwayele ukuthi ngempela ngingudokotela manje. Kuyangikhuthaza kakhulu lokhu ukuthi ngiqhubekele phambili ngisebenze kanzima ngokuzikhandla ngikhulise ibandla ngiphinde ngisebenzele nemiphakathi yakithi,” kubeka yena.
Uthe ngesikhathi ethatha izintambo kuMbhishobhi omdala ongasekho emhlabeni ngo-2007 ibandla lali namagatsha ayi-11 kuphela kodwa manje selikhule laze laba namagatsha angama-27 esifundazweni iKwaZulu-Natal .
Uthe ngesikhathi eqala ukuthatha izintambo kwakungekho lula kodwa wabekezela ngoba wayazi ukuthi ufunani.
“Namanje ngeke ngize ngisho ukuthi kulula, kusamele umuntu aqhubeke asebenze ngokuzikhandla ukukhulisa ibandla ukuze libe nomthelela omuhle emphakathini. Angifuni ukuthi abantu bazi ukuthi leli yibandla nje kuphela lapho kudunyiswa khona uNkulunkulu, kodwa kumele bazi ukuthi lena yindawo abangakhalela kuyona futhi iyingxenye yomphakathi uma udinga usizo.
“Sifuna leli bandla lifundise intsha indlela yokuziphatha, liyifundise inhlonipho liphinde lifundise nawo wonke amalungu omphakathi ukuthandana nokwesekana ngaso sonke isikhathi. Ngifuna liphinde likhule liphumele nakwezinye izindawo,” kusho uDkt Myeza.